कविता-‘परदेशीको आत्मा भन्छ’-रूद्रसेन विश्वकर्मा ‘मनको राजा’
नरोईकन बस है मेरी माया तिमी रोए यो खाडीमा २/३ वर्ष खै कसरी काटुला र म तिमीले मन बुझाएनौं भने यो खाडीमा पैसासंग यो जिन्दगी, फेरी खै कसरी साटुला र म पैसा कमाई तिम्रो हरेक इच्छा पुरा गर्ने नै छु…
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मनायो अमेरिकामा १०९ औँ लक्ष्मी जयन्ती
अमेरिका । सेन्ट लुइस मिजौरी, अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज मिजौरी च्याप्टरले महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको १०९ औँ जयन्ती मनाएको छ। कार्यक्रममा आदिकवी भानुभक्त आचार्य, युवाकवी मोतीराम भट्ट, महाकवी लक्ष्मीप्रसाददेवकोटालगायतका तस्वीरमा माल्यार्पण, गरीनुका साथै दीप प्रज्ज्वलन गरिएको थियो। राष्ट्रिय गानबाट…
गजल–‘मायाको शब्द कहाँ बिलायो आज’–महेश कुमार कार्की
मायाको शब्द कहाँ बिलायो आज फाटेको मन कस्ले सिलायो आज। पागल बनायौ मायामा पागलै भए साँचो मायाले जहर पिलायो आज। मेरो जिन्दगी दुःखैमा बिताउनेछु अब तिमीले पराईसंग मन मिलायौ आज। दिनहुँ दिन भौतारी हिड्दा बाटोमा म प्रेमको न्याय खै कस्ले…
रोशन न्योपानेको कविता 'जाँच'
उ अस्तिसम्म भुमिगत थिइ! ठ्याक्कै एक महिना भनिदिउ, उ कुनै देश टुत्र्याउने संगठन कि नेतृ होइन । न त कुनै अपराधिक गिरोह कि नाइका ठ्याक्कै भन्दा सबै भुमिगत अपराधी होइनन। सबै खराब मनस्थितिका नहुन पनि सक्छन। अझ उ त मेरी…
ऋणले कुल्चिएको मेरो शैशवकाल
डिल्ली राम अम्माई ,बेल्जियम जवानीको सूर्य उदाउनु पूर्व बैंसका उर्बर लहरहरुमा उन्मत्त बनेर हराउनु पूर्व म ऋणले निमोठिएको थिएँ। सुत्ने बेलामा सोचिरहन्थें बिहान कसरी बिताउने होला के भनेर हाकिमकी श्रीमतीलाई अर्को हप्तासम्म ऋण थामिदिनुस भन्दै विनयी हुँदै मनाउने होला। बिहान…
कविता –‘एउटा पातलो संसार’– निर्मल आचार्य
बिचित्र छ यो पातलो संसार न कहिले घुमेर सकिने न कहिले चिनेर सकिने यात्रा गर्ने हरुको भिड् भाड छ अनि घुमी सक्ने चाहानाँ छ यो पातलो संसार, काँही भोका पेटहरुले भुँडिभरी टन्न खान पाँउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने यो पातलो संसार…
अमेरिकाको बोस्टनमा १०९ औँ लक्ष्मी जयन्ती मनाइयो
अमेरिका । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टरको आयोजनामा महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको १०९ औँ जयन्ती रूपमा मनाइएको छ। देवकोटाको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिएपछि चार वर्षीय बालक हार्दिक काफ्लेले गायत्री मन्त्र र सरस्वती वन्दना कण्ठस्त सस्वर रूपमा सुनाएर कार्यक्रमलाई आकर्षक मोड…
बेल्जियममा लक्ष्मी जयन्ती मनाइयो
डिल्ली राम अम्माई बेल्जियम । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज बेल्जियमले शनिबार बेल्जियमको लुभेन शहरमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११० औं जन्मजयन्ती मनाएको छ। नेपाली दुताबास बेनेलक्सका द्वीतिय सचिव सुधिर भट्टराइको प्रमुख आतिथ्यता र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज बेल्जियमका अध्यक्ष राज कुमार पुडासैनीको सभापतित्वमा…
ऊ अर्थात मेरो प्रेमी
मुना बोहोरा म हाँसे भने उसको मुहार हाँस्छ जब म अफ्ट्यारा बाटाहरु सजिलै हिड्न सक्छु उसका हातबाट मज्जाले ताली बज्न थाल्छ म एक्लै भएको बेला एक्लै हिडेको बेला मेरो मन भित्र ऊ छटपाटाइ रहेको हुन्छ । ऊ तनाबको…
कविता –‘नयाँ मान्छे’– मिलनकान्छा किराँती
हो, त्यही प्रश्नले बेलाबेला मलाई पनि चिथोर्छ, तपाईलाई जस्तै ! ठीकै थियो अफ्रीका! मण्डेला किन चाहियो? काला–गोरा बिचको विभेद न थियो ठीकै थियो चाइना माओत्से तुङ किन चाहियो? हुनेखाने–हुँदाखाने बिचको वर्ग विभेद न थियो हो, त्यही प्रश्नले बेलाबेला मलाई पनि…